MotioCAP Ukuqinisekiswa kweKognos
Uhlalutyo lwe-IBM Cognos
Ulawulo lwenguqulo kunye nokuThunyelwa
Ukulayisha umthwalo kunye novavanyo loxinzelelo
Ukubeka iliso kunye nokulumkisa
I-BI kunye neBlog Analytics
Ukubonelela ngeqela lakho ngeNzuzo yoHlalutyo oluZinzileyo
Motio I-automate imisebenzi edinisayo yolawulo lwe-BI kunye nokuhambisa iinkqubo ezinzima ze-BI ukuvumela iiNgcali zakho zoHlahlelo zijolise koku zikulungeleyo: ukuhambisa ulwazi olusebenzayo kubaphathi bamashishini ukubanika umfanekiso opheleleyo weshishini labo.
UKUKHONA MOTIOCI ABAKHONZI
Ukukhululwa okusha MotioCI (uguqulelo 3.2.10 FL9) iyafumaneka ukuze ukhutshelwe.
Ulungiso lweebug ezibalulekileyo:
Iidilesi ezibaluleke kakhulu ze-Log4j2 semngciphekweni CVE-2021-45105 ngokuhlaziya kwi-Log4j2 v2.17
Olu lulungiso kwaye akukho nciphiso lufunekayo xa abathengi bephucule le nguqulo entsha yokukhululwa MotioCI. Ukuba abathengi sele belandele amanyathelo ngokwethu Inqaku le-KB apha, akufuneki baphucule ukunciphisa imiba. Ukuba iimfuno zokhuseleko ngaphakathi kumbutho wakho zifuna uhlaziyo kwi-v.2.17 ngoko uhlaziyo luya kufuneka lwenziwe.
umxokozelo MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio iakhawunti yewebhusayithi efunekayo).
QAPHELA: Oku akuchaphazeli nayiphi na enye Motio isoftware- MotioPI, MotioCAP, PersonaIQ, Reportcard or Soterre
Motio inkxaso ilapha ukukunceda ngaphandle kweendleko ngokunyusela kwakho kwi-3.2.10 FL9 Iinkcukacha zoqhagamshelwano Motio inkxaso.
Iziganeko kunye neeWebinars
Ngaba ubusazi ukuba iNkxaso yePrimiyamu yeGitoqlok isimahla?
Ukuba sele usebenzisa i-Gitoqlok, iplagi yasimahla yeQlik Sense eguqulela izinto ezibonakalayo kunye nedatha yokulayisha imibhalo ngokuthe ngqo kwisikhangeli sakho, ke qiniseka ukuba ubhalisela inkxaso yeprimiyamu! Isimahla!
Ukuvala umsantsa ukuze ufumane amava angenamthungo eQlik Sense
Ufuna ukuhamba komsebenzi okungenamthungo kunye neQlik Sense. Ufika njani apho?
Ngaba ukulungele ukufunda ukwenza amava akho eQlik Sense asebenze ngakumbi ngokuzenzekela ngelixa ugcina ukuthotyelwa kunye nemigangatho yombutho? Iingcali zethu ziya kuchaza indlela Qlik ngokuzithemba ngaphandle komthwalo wolawulo okanye ngaphezulu ngaphezulu.
Sifuna ukukunceda ukusombulula iingxaki zakho zeBI! Masinxibelelane kwenye yezi ziganeko zizayo kunye neewebhu.
Jonga Zonke izehlo kunye neeWebinars
Izisombululo zethu zesoftware zikunceda ukuba ufezekise impumelelo ye-BI kwiCognos Analytics, Qlik, kunye noCwangciso loHlahlo-lwelo inikwe amandla yi-TM1.
kunye MotioIsoftware kwicala lakho, uya kuzuza ngokufanelekileyo emsebenzini wakho, uphucule umgangatho kunye nokuchaneka kweeasethi zolwazi, wandise ukusebenza kweqonga, ufezekise ixesha elikhawulezayo lokuthengisa, kunye nokulawula ulawulo lweenkqubo.
Izisombululo zokuphucula ukuphuculwa kweCognos, ukuthunyelwa, ulawulo lwenguqu kunye nolawulo lotshintsho, ukuvavanya ukuqhuba kunye nemisebenzi yolawulo, ukuphucula ukusebenza, ukwenza i-CAP kunye ne-SAML, kunye negama lendawo yokufuduka / ukutshintshwa.
Izisombululo kulawulo lwenguqulo kunye nolawulo lotshintsho kwiQlik kunye nokuphucula ukusebenza kokuhanjiswa.
Izisombululo kulawulo lwenguqulo kunye nolawulo lotshintsho kwiCognos TM1 kunye noCwangciso loHlahlelo, ukwenza lula inkqubo yokuhanjiswa, ukuphucula imisebenzi yezolawulo kunye nokulawula utshintsho kwezokhuseleko.
Amabali okuphumelela kwabaThengi
Sukuthatha nje ilizwi lethu ngalo. Funda malunga nabaxhasi bethu kwaye njani Motio ibancede ukuphucula amaqonga abo ohlalutyo kunye nokonga ixesha kunye nemali.
Ngaba uyazi ukuba ziiCognos zoPhuculo oluPhambili?
Emveni kweminyaka Motio, Inc. iphuhlise "ezona ndlela ziQhelekileyo" ezijikeleze ukuphuculwa kweCognos. Sizenzile ezi zinto ngokwenza okungaphaya kwama-500 okuphumeza kunye nokumamela abathengi bethu. Ukuba ungomnye wabantu abangaphezu kwama-600 abaye kwezi zethu ...
Motio, Inc. Ifumana iGitoqlok
Motio, Inc. Ifumana iGitoqlok Ukudibanisa kuQinisekiso lweNguqulelo ngaphandle koBuchwephesha bePLANO, eTexas - 13 kweyeDwarha 2021 - Motio, Inc., inkampani yesoftware ekunceda ugcine i-analytics yakho ngokwenza ishishini lakho lobukrelekrele kunye nohlalutyo ...
Ke uthathe isigqibo sokuphucula iiCognos… Ngoku yintoni?
Ukuba ixesha elide Motio mlandeli, uyazi ukuba asingobasemzini kuhlaziyo lweCognos. (Ukuba umtsha ku Motio, Wamkelekile! Siyavuya ukuba nawe) Sibizwa ngokuba yi "Chip & Joanna Gain" yeCognos Upgrades. Kulungile ukuba isivakalisi sokugqibela siyabaxa, ...
Ungoyiki, Ukuphuculwa okulula kweCognos kulapha
Iqela kwi-CoBank lithembele kwiCognos ngokunika ingxelo yokusebenza kunye nenkqubo ephambili yokunika ingxelo yezemali. Ukugcina iiCognos ziphuculwe kubavumela ukuba bagcine ukudityaniswa kunye nezinye izixhobo zeBI kunye neenkqubo. Iqela linabasebenzisi beshishini abangama-600 abambalwa abaphuhlisa iingxelo zabo kwisithuba "soMxholo wam".
Iqela labasebenzisi beCognos eyiNyani- eMantla eTexas
Xa usiva igama elithi, “Texas” yintoni ethi qatha engqondweni? Mhlawumbi iminqwazi yeelitha ezilishumi, iibhutsi zeenkomo, ibarbeque, ukusebenza kweCognos! Kulungile, mhlawumbi isixhobo sakho se-BI osithandayo asiphezulu kwengqondo, kodwa kufanelekile! Ngethuba lokuqala, Motio ibamba iNyakatho yeNyakatho ...
Jonga Zonke iZifundo
Funda iBhlog yethu
funda Motio Imveliso "njani-kuyo," i-BI yeendlela ezilungileyo kunye neendlela zeshishini, kunye nokunye.
Funda iBlog yethu
BlogUhlalutyo lweCognosUkuphucula iFektriUkuphuculaUkuphucula iCognos
BlogImbali ye Motio Motio QlikSoterre
Motio, Inc. Ifumana iGitoqlok Ukudibanisa kuQinisekiso lweNguqulelo ngaphandle koBuchwephesha bePLANO, eTexas - 13 kweyeDwarha 2021 - Motio, Inc., inkampani yesoftware ekuncedayo ugcine inzuzo yakho yohlalutyo ngokwenza ubukrelekrele kwishishini lakho kunye ...
Ngaba ukulungele ukulungelelanisa nokuzenzekelayo kwiqonga lakho le-BI kunye nohlalutyo?
umxokozelo MotioPI Simahla. Okanye ucele MotioPI okanye MotioCI Ukusetyenziswa simahla kunye nohlaziyo lwakho lweCognos Analytics.
Isicwangciso, TX 75024
Ifowuni: 1 (972) 447-9595
Inombolo yasimahla: 1 (877) 362-8708
© 2021 Motio. Onke Amalungelo Agciniwe ● Migaqo nemiqathango ● umthetho wabucala